राजा महेन्द्रले ०१३ सालमा शिला’न्यास गरेको कान्ति लोकपथ अझै अधुरो, ६४ वर्षमा पनि बनेन ९० किलोमिटर सडक ! – Nepal Online Khabar
April 12, 2021 313
Prevमनिषा कोइराला भन्नुहुन्छ : राजालाई जति देशको माया नेतालाई हुदैन, राज’तन्त्र नै अन्तिम विकल्प हो ।
Nextभारतले दियो ज्ञानेन्द्रलाई राजा को सम्मान रथ मा घुमायर गरे स्वागत !
राष्ट्रपतिलाई प्रचण्डले भने – कसैले उक्साहटमा नलाग्नुस्, सिंगो देशको राष्ट्रपति बन्नुस् ‘
यिनै हुन् साहसी, हिमतवाला पाइलट बहिनि जसले आफ्नो दाई को न्यायको लागि अब चाल्दैछिन् यस्तो कदम , घ’ट’ना को वा’स्तवि’कता के हो ?…….
तीनकुनेमा बुद्धपार्क निर्माण गरिँदै…हेर्नुहोस् ।
जोशी परिवारले अ’स्वीकार गर्‍याे सरकारको १० लाख सहयोग